Massenez Kirsch Vieux Cherry Spirits (TW90005) ~ ICT.com.mm
HomeSpiritsMassenez Kirsch Vieux Cherry Spirits (TW90005)
Tommasi Grappa di Amarone Spirits (TW90001)Back to Spirits
Massenez Kirsch Vieux Cherry Spirits (TW90005)
Producer: G.E. Massenez Country: France Style: Brandy Size: 750ml ပြင်သစ်နိုင်ငံ Massenez အဖျော်ယမကာလုပ်ငန်းကနေ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Kirsch Vieux Cherry Spirits ဘရန်ဒီ ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်ဆတ်တဲ့ Cherry သီးတွေကို ခူးဆွတ်၊ ကြိတ်ချေ၊ အချဉ်ဖောက်ပြီးမှ ပေါင်းခံချက်လုပ်ထားတဲ့ Spirit အမျိုးအစား ဘရန်ဒီဖြစ်ပြီး Alcohol ပါဝင်မှု 40%... [Learn more]
ပြင်သစ်နိုင်ငံ Massenez အဖျော်ယမကာလုပ်ငန်းကနေ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Kirsch Vieux Cherry Spirits ဘရန်ဒီ ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်ဆတ်တဲ့ Cherry သီးတွေကို ခူးဆွတ်၊ ကြိတ်ချေ၊ အချဉ်ဖောက်ပြီးမှ ပေါင်းခံချက်လုပ်ထားတဲ့ Spirit အမျိုးအစား ဘရန်ဒီဖြစ်ပြီး Alcohol ပါဝင်မှု 40% အထိ ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Cherry သီးကနေ ချက်လုပ်ထားတဲ့ ဘရန်ဒီအရသာကို နှစ်ခြိုက်သူတွေအကြိုက်တွေ့ကြမဲ့ ပြင်သစ်ဘရန်ဒီ ဖြစ်ပါတယ်။
This cherry eau-de-vie has an aroma that mixes cherry witharesin-like note, coupled withabitter, almond-like palate that suggests cherry stones. Most of the fruit emerges on the rounded finish. Fantastic!